Cajal: Waa Maxay Xirfadaha Bogga Xiriirinta?. 3 Tilmaamaha Muhiimka ah ee Haysashada Buqcad-Onlineka
Bogagga Xiriirinta Qalabka Xirxirashada waxay kala jajabisaa HTML-ka ee bogga waxayna ka dhigtaa isku xirka boggaga internetka ee kala duwan
. Marka xogta si buuxda loo tirtiro, waxay muujinaysaa isku xirnaanta qaabka qoraalka ah waxayna shaqadeena u fududeyneysaa. Tani sawir-qaade online ah kuma wanaagsanaayo kaliya xidhiidhada gudaha laakiin sidoo kale waxay muujinaysaa xiriirada dibadda waxayna u bedelaan xogta qaabka la akhrisan karo. Xiriirinta isku-dhafka waa hab sahlan oo lagu heli karo codsiyo kala duwan, website-yada, iyo teknooloojiyada web-ku-saleysan. Ujeedada Bogga Xirfadaha Qalabka Xirfadaha ayaa ah in la xoqdo macluumaadka laga helo goobo kala duwan. Waxaa la dhisay qalab farsamo oo toos ah oo toos ah oo lagu magacaabo Lynx waxayna ku haboon tahay dhammaan nidaamka hawlgalka. Lynx waxaa badanaaba loo adeegsadaa in lagu tijaabiyo iyo xalinta dhibaatooyinka bogagga shabakadda oo ka socda xariijin. Xiriirinta Bogga Bogga ah waa qalab isticmaalka ah oo markii ugu horreysay lagu sameeyay 1992. Waxay isticmaashaa nidaamyada internetka oo ay ka mid yihiin WAIS, Gopher, HTTP, FTP, NNTP, iyo HTTPS si aad shaqo u hesho.
Saddex sifood oo ugu muhiimsan qalabka:
1. Xogta Isku-dhafan ee Arimaha Dhex-galka ah:
Isticmaalida bog-isku-xir qalab yareynaya , waxaad xoqin kartaa ama soo saari kartaa xogta ku jirta kala-duwan. Qeybaha caadiga ah waxay qaataan saacado si ay hawshooda u gutaan, laakiin qalabkani wuxuu ku shaqeeyaa jumlado kala duwan si uu ula socdo ilaa 30 bog oo shabakad isla markaasna ma harin waqtigaaga iyo tamartaada.
2. Soo saar macluumaadka laga helo Websaydka Calaamadaha:
Qaar ka mid ah meelihii firfircoon waxay isticmaalaan farsamooyinka farsamooyinka xogta si loo abuuro codsiyo asynchronous ah sida AJAX. Sidaa daraadeed, waa wax adag oo ah waraaqaha caadiga ah ee shabakadda internetka si ay uga saaraan xogta laga helo goobahaas. Bogga Xiriirinta Qalabka Xirfadaha, si kastaba ha ahaatee, wuxuu leeyahay sifooyin awood leh wuxuuna u saamaxaa dadka isticmaala inay xogta ka soo ururiyaan goobaha aasaasiga ah iyo kuwa firfircoon ee sahlan. Waxaa intaa dheer, qalabkan wuxuu ka soo saari karaa macluumaadka bogagga warbaahinta bulshada wuxuuna leeyahay shaqooyin farsamo si looga fogaado qaladka 303.
3. Macluumaadka dhoofinta ee qaab kasta:
Bogga Xirfadaha Qalabka Xirfadaha waxay taageertaa qaabab kala duwan iyo xogta dhoofinta qaabka MySQL, HTML, XML, Access, CSV, iyo JSON. Waxaad sidoo kale nuqul ka dhigi kartaa natiijooyinka dukumiintiga ereyga ama si toos ah u soo dheji faylasha la soo saaro si aad u heshid. Haddii aad hagaajisid goobaha, bogga xariirka qalabka xariirka ayaa kuugu soo deyn doona xogtaada ku saabsan dukankaaga adag si toos ah qaabka hore loo qeexay. Waxaad markaa isticmaali kartaa xogtan si toos ah oo aad u wanaajin kartaa waxqabadkaaga bogga illaa xad.
Sida loo isticmaalo qalabkan?
Waa inaad gelisaa URL-ka oo u ogolaataa qalabkan inuu guto hawshiisa. Waxay marka hore baaris ku sameyn doontaa HTML-ka waxayna soo saari doontaa xogta adiga oo ku salaynaya tilmaamahaaga iyo shuruudahaaga. Natiijooyinka waxaa badanaa lagu muujiyaa liistada liiska. Marka xiriirada si buuxda loo tirtiro, astaanta ayaa lagu soo bandhigi doonaa dhinaca bidixda. Haddii aad hesho farriinta "Liis Xiriir la'aanta ah" waxaa laga yaabaa inay tahay sababtoo ah URL aad soo gashay waa mid aan sharci ahayn. Hubi inaad gashay cinwaanka dhabta ah si aad uhesho links. Haddii aadan awoodin inaad soo qaadatid xiriiriyeyaasha gacanta, doorasho kale ayaa ah inaad isticmaasho APIs. API ayaa loo adeegsadaa hab-raaca adoo adeegsanaya isla markaana waxay qabtaan boqolaal weydiimo saacado saacad kasta oo loogu talagalay dadka isticmaala Source .